Pakistan: Maxaa sababay in dumarka laga mamnuuco inay dukaamada tagaan? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Pakistan: Maxaa sababay in dumarka laga mamnuuco inay dukaamada tagaan?
Pakistan: Maxaa sababay in dumarka laga mamnuuco inay dukaamada tagaan?
Santosh Kumar, oo ah xubin ka ka tirsan golaha deegaanka Vidh ee bulshada Hinduuga ah , ayaa sheegay in dukaamadii ganacsatada bulshada Hinduuga loo xiray sababo la xiriira mudaaharaad looga soo horjeedo dilka ganacsade Hinduu ah
Maxaa lagu sheegay Waraaqaha, ururkeese magaciisu ku dul qoranyahay?
Waraaqahaan waxaa ka muuqda sawir muujinaya Seef gacanta lagula sawiray qaybta hoosana waxaa looga qoray qoraal sidaan u dhigan “Caravan Saifullah”.
Maxamed Aslaam Shiikh, xoghayaha guud ee Urur Caafimaad oo ah kuwa gaarka loo leeyahay ee deegaanka Vidh, ayaa sheegay in waraaqahaan yar yar ee lagu ak- daadiyay dukaamada ay ku qoranyihiin qoraallo isku mid ah hase yeshee wuxuu meesha ka saaray in magac Urur ku qoranyahay.
Ganacasatada waxaa laga codsaday inaysan u oggolaan dumarkooda inay guryahooda ay uga baxaan qaab aan loo baahneyn gaar ahaanna inay inay dhex mushaaxaan suuqyada.
Wararka ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqii suuqa uu yaraaday wixii ka dambeyay markii ay digniintaan soo baxday oo dumarkii ayaa ku yaraaday.
Dumarku ma booqdaan Vidh Bazaar?
Maxamed Aslaam Shiikh, xoghayaha guud ee Urur Caafimaad oo ah kuwa gaarka loo leeyahay ee deegaanka Vidh, ayaa sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay baxeen digniinahaan uu kordhay walaaca ay qabaan dumarku isla markaana aysan kaligood tagin suuqa
Wuxuu sheegay in dumarka gudaha ay inta badan suuqa u yimaadaan arrimo caafimaad dartood balse xitaa wakhtigaas waxaa la socda rag qoysaskooda ka tirsan .Waraaqahaan suuqa lagu daadiyay ayaa la sheegayaa in ay yihiin markii labaad.
Horey waxaa deegaankaas dhibaatooyin loogu gaystay ganacsato isugu jira Muslimiin iyo Hinduu,sidoo kalana waxaa loo jeediyay hanjabaado.
Booliska muxuu ka yiri arrintaan?
SHO Cabdul Raxiim oo ka tirsan booliska Vidh ayaa xaqiijiyay waraaqaha suuqa lagu daadiyay ee ganacsatada loogu digayo.Isaga oo la hadlaayay BBC-da, wuxuu sheegay in warqadaha la dhigay hal meel oo kaliya.Wuxuu intaasi raaciyay in aysan jirin wax cabasho ah oo la xiriira waraaqaha oo ganacsatada uga yimid isaga shaqsiyan.
“Sida iska cad warqadahaan waxaa soo dhajiyay urur la yiraahdo Caravan Saifullah, laakiin urur noocan oo kale horay loogama maqal Vidh iyo nawaaxigeeda.”
Wuxuu sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax kiisas ah oo laga diiwaan galiyay arintaan balse laga baarayo dhinacyo kala duwan.
Ganacsatada deegaanka ayaa sheegay in dukaamadoodu sii xirnaan doonaan tan iyo inta laga helayo damaanad qaad amni oo la isku halleyn karo.
Previous articleSiyaasiga Dronka ah ee Cali Gueay oo faaleeyay Qidada Lagu kala Hororsanayo kursiga Gudoonka barlamaanka iyo ka caasimada hargeya
Next articleDeg Deg,Hadaanu Nahay Aqlabiyada Baarlamanka kasoo baxay beesha harto digniin ayaanu udiraya beesha dhexe